Lalàna · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Lalàna · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Lalàna tamin'ny Marsa, 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Marsa 2012
Satria moa fahita any amin'ny firenen-drehetra ny mpisera Twitter mampiasa tenifototra, dia misy ny tenifototra miforona isan'andro, isan'ora, eny fa na dia isa-minitra aza indraindray. Tany Koety, namorona ny tenifototra #بطارية (bateria na mpiteraka angovon'aratra amin'ny teny Arabo) ary dia vaky ny vavahadin'ny helo. Manazava ny antony amintsika ny mpamaham-bolongana...
Ny 23 Oktobra 2011, nifidy ny antenimiera handrafitra ny lalam-panorenany vaovao ry zareo Toniziana, taorian'ny nanonganana ny fitondran'i Ben Ali. Amin'izao fotoana, dimy volana aty aoriana, vao ny fandinihana ireo drafitra natolotra no natomboky ny antenimiera. Kanefa, ny tsy fitovian-kevitra manodidina ny artikla voalohany dia mampihisatra ny asan'ny antenimiera ary...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Marsa 2012
Ireo Saodiana mpampiasa Twitter dia nanambatra ny heriny mba hanasongadina ny fijalian'i Shaikh Yusuf Al-Ahmad, gadra politika iray, any anaty tranonkala fitorahana bilaogy kiritika. Ny ezak'izy ireo dia nahatonga ny anaran'ilay manampahaizana lalina momba ny resaka Islamika ho malaza be eran-tany, nanaitra ny saina mikasika ny famonjàna azy tsy nisy...
Azia Atsimo17 Marsa 2012
Tao ao anatin'izay andro vitsy lasa izay, vehivavy mpiasa maro an'isa ao an-tanànan'i Gurgaon no nalaina an-keriny sy naolana , eo amin'ny 30 kilometatra miala ny renivohitra Indiana, ao New Delhi no misy izany tanàna izany. Ho famahana ny olana, dia nandray ny andraikiny ny mpitondra fanjakana amin'ny fiarovana ny olom-pirenena, tamin'ny alalan'ny fangatahana...